दीपिका पादुकोणले नयाँ वर्षमा डिलिट गरिन् आफ्ना सबै सोसल मिडिया पोस्ट ? इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, फेसबुक खाली – AB Sansar
दीपिका पादुकोणले नयाँ वर्षमा डिलिट गरिन् आफ्ना सबै सोसल मिडिया पोस्ट ? इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, फेसबुक खाली
January 1, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on दीपिका पादुकोणले नयाँ वर्षमा डिलिट गरिन् आफ्ना सबै सोसल मिडिया पोस्ट ? इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, फेसबुक खाली
बलिउड नायिका दीपिका पादुकोण यतिबेला आफ्ना श्रीमान् तथा बलिउड नायक रणबीर सिंहसँग राजस्थान जयपुरमा नयाँ वर्षको उत्सव मनाइरहेकी छिन् । यसैबीच नायिकाले आफ्नो सोसल मिडिया अकाउन्टमा ठूलो परिवर्तन गरेकी छिन् । दीपिका पादुकोणको सबै सोसल मिडिया – इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, फेसबुक खाली भएका छन् । दीपिकाको सबै सोसल मिडिया अकाउन्टमा उनका सबै पोस्ट डिलिट भइसकेका छन् र यसले धेरैमा उत्सुकता जगाएको छ ।
यतिमात्रै होइन, दीपिकाका अकाउन्टको पोस्ट डिलिट हुनुका साथै उनको प्रोफाइल फोटो पनि परिवर्तन भएका छन् । उनको सबै सोसल मिडिया अकाउन्टमा उनको फोटोको साटो ‘इन्डिया टुडे’ म्यागजिनको कभर फोटो राखिएको छ । अब दीपिका आफैंले पोस्ट डिलिट गरेकी हुन् कि उनको अकाउन्ट ह्याक भएको हो वा उनको आउँदो फिल्मको प्रोमोशनको कुनै तरिका हो भन्नेबारे कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।
दीपिका सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा निकै सक्रिय रहन्छिन् । उनी आफ्ना फोटो पोस्ट गर्नुका साथै आफ्ना विभिन्न क्रियाकलाप पनि पोष्ट गर्ने गर्छिन् । दीपिका पादुकोणको इन्स्टाग्राममा ५ करोड बढी फलोअर्स छन्, यस्तै ट्वीटर र फेसबुकमा पनि उनका राम्रै फलोअर्स छन् ।
कुकुरको बच्चा भन्दै पालेको २ वर्षपछि बन्यो भालु !
सन् २०२२ भित्र नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाइनेछ : प्रधानमन्त्री ओली
रौतहटको मौलापुर नगरसभामा झडप, प्रहरीद्वारा अश्रुग्याँस प्रहार,अवस्था तनावग्रस्त
काठमाडौंमा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको पुत्ला द’हन
June 6, 2021 Admin01
कुश्मा नगरपालिका–१२ ठुलीपोखरीस्थित राम्चे बस्ती
May 16, 2021 Admin01